raive nebutiro flooring, wpc raive nebutiro flooring uye spc flooring
4.Base rukoko pamwe Washington City Offices
Changzhou Lingdian Wood kambani yakavambwa muna 2003. Our chirimwa nzvimbo iri 80,000 mativi mamita. Tiri aitungamirira zvebhizimisi mune raive nebutiro flooring, wpc raive nebutiro flooring uye spc flooring mu China. Nokuti raive nebutiro flooring, kukwanisa iri midziyo anopfuura 150 pamwedzi; Nokuti wpc raive nebutiro flooring. Kukwanisa kwedu midziyo anopfuura 150 pamwedzi; For spc flooring, vanokwanisa wedu midziyo anopfuura 50 pamwedzi.